Gobolka hiiraan:ayaa kusoo waramaya in Ciidamaad Xoogga Dalka Soomaalieed maleeshiyaadka nabad iyo nolaal diidka ah ee Al-shabaab kala wareegeen gacan ku hayntiisa. – idalenews.com
Gobolka hiiraan:ayaa kusoo waramaya in Ciidamaad Xoogga Dalka Soomaalieed maleeshiyaadka nabad iyo nolaal diidka ah ee Al-shabaab kala wareegeen gacan ku hayntiisa.
Wararka saaka ka imaanaya Gobolka hiiraan ayaa kusoo waramaya in Ciidamaad Xoogga Dalka Soomaalieed maleeshiyaadka nabad iyo nolaal diidka ah ee Al-shabaab kala wareegeen gacan ku hayntiisa.
Axmed Maxamed Tareedisho oo ka mid ah Saraakiisha Ciidamada Xoogga Dalka Soomalaiyeed ayaa sheegay in saaka maleeshiyaadka nabad iyo nolal diidka ah ee Al-shabaab ka sareen Deegaanka Moqokori ee Gobolka Hiiraan hada Ciidamada Xooggu gacanta ku hayaan.
Sargaal sare Tareedisho ayaa tilmaamay in ay qasaare Xoogan gaarsiiyeen maleeshiyaadkii Al-shabaab ee ku sugnaa Deegaanka moqokori oo saaka gacanta u gashay Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliyeed iyadoona ay xusid mudan tahay in deegaanka moqokori uu maleeshiyad u ahaa istaraatiiji.
Ciidamada Xoogga Dalka Soomaaliya ayaa saacadihii lasoo dhaafay deegaano iyo degmooyin dhaca Koonfurta iyo Bartamaha Dalka ka sameeyay Howlgalo ka dhan ah maleeshiyaadka nabad iyo nolal diidka ah ee Al-shabaab.
magaalada Dhuusamareeb :Madaxweynaha Galmudug Axmed Ducaale Geelle Xaaf ayaa maanta gaaray magaaladaas
Suuriya:QM oo sheegtay in gargaar la gaarsiin waayay dadku ku xayiran goobaha ay ka socdaan dagaalada …..